China Helical Tooth Gear maka Trailer Parts emepụta na ndị na-ebu ya | Atụmatụ
Ulo oru na ulo oru ogwu
Injinia na akụrụngwa akụrụngwa
Waygbọ okporo ígwè, ụgbọ ala na akụrụngwa ụgbọ oloko
Ike nka na uzu
Nchedo na izuike
Nchegbu nke mmadụ
Helical Nha nha Gear maka Trailer Parts
Rotary diaphragm valvụ
Cross reamer nke anụ grinder akụrụngwa
Echefuola wax nkedo burner ngwa eji petroche ...
Ngwa oku eji eji ọkụ ọkụ
Ngwunye nnyefe nke helical na-adịgide adịgide, ikike ibu dị ike, na mkpọtụ na mmetụta dị obere. Mgbe ị na-arịgo ma na-agbada ugwu ahụ, ị ​​kwesịrị ịgbanwee gaa na obere gia n'oge. Ọbụlagodi na ịnwere nnyefe akpaka, ọ ga-ahapụ gị ka ịgbanwee gia aka gị. Braking ga - enyere aka idobe injin ahụ ọsọ ọsọ mgbe ị na - arị ugwu.
Trailer ọdịda gia bụ ụdị nke telescopic nkwado nke nwere ike na-adọkpụ ụgbọala larịị mgbe ụgbọala na-adọkpụ disassembled. Ihe mgbada, nke a makwaara dị ka onye na-edozi ahụ, kwesịrị ịnwe ikike kwesịrị ekwesị ma kwadebe ya na ngwa ngwa iji bulie ụgbọala na-adọkpụ mgbe ọ dị mkpa.
Produst Aha Ihe onwunwe Ngwa Nkedo ndidi Ibu ibu
Helical Nha nha Gear maka Trailer Parts Ogba Ihe nhụchalụ ISO 8062 CT5 60 g
Ego ole ka ụgbọala na-adọkpụ nwere?
Enwere uzo 10 n'ime ugbo ala. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị nrụpụta na-ebuwanye ibu n'ụgbọala. Enwere ihe ruru 18 na crankshaft nke gwongworo.
Eserese → akpụzi injection Ntụtụ ọgwụ → osisi na-agbakọta → Shell ịkpụzi → Dewax-buring → wụpụ → Shel wepụ → Cuttiing-Griding → Machining → Deburring → Elu imecha → Mgbakọ → Nnyocha nyocha → ingchịkọta
Nke gara aga: Rotary diaphragm valvụ
Osote: Nkenke mgbatị na machining akpakanamde akụrụngwa
Helical Nha nha Gear
Trailer mgbabere uzo
Nouel mmanụ a mere na China
A na-eji ihe eji emepụta ihe eji emepụta mmiri mmiri ...
Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ mere na China
Njikọ na esi mmiri ọkụ kpo oku usoro
Mirror egbu maramara igwe anaghị agba nchara mgbabere eji g ...